हामीबीच छिट्टै एकता हुने आधार भएको छ - Ratopati
हामीबीच छिट्टै एकता हुने आधार भएको छ
- | जनार्दन शर्मा प्रभाकर, स्थायी समिति सदस्य, एकीकृत माओवादी
माओवादी पुर्नगठन अभियान के हुँदैछ ?
माओवादी आन्दोलन पुर्नगठन अभियान जुन युवाहरुको टिमले सञ्चालन गरेको हो, त्यो आज पनि जारी छ । यसले तय गरेका उद्देश्य अनुसार नै आज माओवादी आन्दोलन, पार्टी र समूहहरु एकताको लागी गम्भीर बहसमा छन् । छलफलसहित एकता अर्थात पुर्नगठनको अन्तिम बहसमा जारी छ । पुर्नगठन अभियानले तयार पारेको खाकाको आधारमा मुख्य नेतृत्व एकताको अन्तिम गृहकार्यमा छन् । हाम्रो उदेश्य पनि फुट र विभाजनबाट आहत हुँदै टाँढिएका नेतालाई माओवादी आन्दोलनको पुर्नगठन र एकताको आवश्यकताको बोद्य गराउनु थियो । यसमा हामी सफल भएका छौँ ।
माओवादी आन्दोलन पुर्नगठन किन आवश्यक भएको हो ?
राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले हामी नयाँ ठाँउमा छौँ । सामन्तवादको अन्त भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । धर्म–निरपेक्षता, उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय लगायत सम्पूर्र्णको समावेशी समानुपातिक प्रतिनीधित्वसहित राज्यका सबै अंगमा सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । नयाँ राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा छौँं ।
यो महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुनुमा सबै माओवादी कार्यकर्ता, नेता र जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र योगदान छ । उपलब्धिको रक्षा गर्दै माओवादी आन्दोलनलाई आजको वर्गीय शन्तुलन र विकसित सामाजिक अन्र्तविरोधकावीच नयाँ नीति, विधि, योजना र कार्यक्रमसहितको नयाँ कार्यदिशा तयार पारेर नयाँ क्रान्तिको मार्गमा बढनुछ । पुरानै नारा दोहोर्याएर होईन ।
जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरागर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नुपर्ने छ । अर्को, दलाद पूँजीवाद, नोकशाही पूँजीवाद र पराजीत सामन्तवादीले खडा गर्ने चुनौतीको सामना गर्न माओवादी आन्दोलन पुर्नगठन अभियान जरुरी छ । जनताको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, राज्य सत्तामा जनताको सहज पहँुच बढाउन र स्वामित्व कायम गर्न, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न, राष्ट्रिय स्वाधिनताको सुदृढ गर्न तथा समग्रमा राष्ट्रको आजको असाधारण कार्यभार पुरा गर्न माओवादी आन्दोलनले मात्र सक्छ । पुर्नगर्ठित नेतृत्वले मात्र गर्न सक्छ ।
सैद्धान्तिक र संगठनात्मक समस्या कसरी हल हुन्छन् ?
माओवादी आन्दोलनभित्रको बहस मूलभूतरुपमा सिद्धान्तकै प्रश्न को हो । आज साम्राज्यवादको नवउदारवाद र माक्र्सवादको फ्युजन गर्नु पर्दछ भन्ने नाटकमा माओवादी आन्दोलनबाट विचलित भएका दलाल र नोकशाहि पूँजीपतिहरुको गठबन्धन भैराखेको छ । यस्तो अबस्थामा माओवादी आन्दोलनमा सिद्धान्तको बहस र शस्लेषण गर्नु पर्दछ । तर, सिद्धान्तको बहानामा पुरानै कुरा दोहोर्याएर वा नयाँका नाममा माक्र्सवादकै मुल्यमान्यतालाई लत्याएर संभव छैन ।
हाम्रा सामु आज मालेमाको रक्षा, विकास र प्रयोग गर्दै वर्ग संघर्षका बाँकी कार्यभार पुरागर्ने कार्यभार छ । जटिलतम श्रृङ्खलाहरुमा सामेल हुँदै राजनीतिक संघर्ष, अध्ययन, अनुसन्धानकावीचबाट अगाडी बढनुपर्छ । त्यसका लागी मालेमावादकै मूल्य–मान्यता भित्रबाटै नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । तसर्थ, हामी सैद्धान्तिक बहस गछौंँ र गर्नैपर्दछ ।
७० बर्ष नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष, १० बर्षे महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रियाका करिब १० बर्षमा भएका तमाम राजनीतिक संघर्ष, आन्दोलनलाई छाडेर बहस हुने होइन । बहस सम्पूर्ण जनताको त्याग, बलिदान र समर्पणबाट प्राप्त उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गर्न होईन । हाम्रो बहस क्रान्तिको निरन्तर प्रक्रियालाई जारी राख्ने बिषयलाई रोक्न पनि होईन । तसर्थ, बहसले हामीलाई नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको पक्षमा उभ्याउने छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न, नेपालको सम्मृद्धिसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न र त्यसमा जनताको अधिकार स्थापित गर्दै सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा राज्यसत्ता ल्याउनेमा नै हाम्रो बहस केन्द्रीत हुन्छ ।
नयाँ सन्दर्भ र परिस्थितिसँगै क्रान्तिको नयाँ प्रक्रियामा अगाडी बढ्न संगठन पनि नयाँ बन्न जरुरी छ । माओवादी आन्दोलनको पुर्नगठनले संगठनलाई आजको क्रन्तिको आवश्यकता अनुसारको हतियारका रुपमा काम गर्छ । सामुहिक नेतृत्वसहित संस्थागत परिचालनका हाम्रा कमीलाई पुरा गर्ने लक्ष लिएको छ । विधिसम्मत परिचालन र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तको पूर्ण पालना नै हो । यो कसैलाई अमान्य हुने कुरै भएन ।
जिम्मेवारीको विषय त समस्या होला नि ?
मुख्य नेतृत्वका कारण एकता र पुर्नगठनमा वाधा पार्दैन । पार्टीलाई केन्द्रीत गर्ने, जनताको आवश्यकतालाई बोध गर्ने, क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिलाई संश्लेषण गर्दै कार्यकर्ता–जनताको भावना र आवश्यकतालाई समेटदै पार्टी हाक्न सक्ने एक से एक नेतृत्व माओवादी आन्दोलन भित्र भएकाले यसमा समस्या छैन । अझ ठोसमा भन्नु पर्दा प्रचण्ड, किरण, बादलसहितको नेतृत्व टिम र त्यसको बरिपरि रहेको युवाहरुको टिम नै माओवादी आन्दोलनका लागी प्रयाप्त छ ।
आम कार्यकर्ता र जनताको आकांक्षा भन्दा बाहिरबाट नेतृत्व दाबी गर्ने होईन । यतिबेला नेतृत्व सम्हाल्न एकले अर्कोलाई आग्रह गर्ने चेतना विकास भएको छ । कमरेड प्रचण्डले आफ्नो सुनिश्चितता खोज्नु भएको छैन । उहाँले पुर्नगठन र एकता चाहनु भएको छ । कमरेड किरणले नेतृत्वका लागी होईन सिद्धान्तको पक्षमा उभिने भएकाले उहाँहरु मुख्यतः किरणजीले राख्ने प्रश्ताव र प्रचण्डले निकाल्ने निश्कर्षमा कुनै विवाद नै हँुदैन ।
त्यसो भए एकता कहिलेसम्म होला ?
तोकेर तिथि–मिति ठोस गर्न त गाह्रो छ । फेरी पनि हामीले माओवादी आन्दोलन पुर्नगठन अभियानलाई जसरी निरन्तर अगाडी बढाउँदै एकताको आधार तयार पार्दै आएका छौँ, यसले मुख्य नेतृत्वकावीचमा अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको छ । यसले हामीवीच छिट्टै एकता हुने आधार दिएको छ । माओवादी आन्दोलन चाडै नै पुर्नगठन हुनेछ ।